War - Maxay Tahay Faa’iidooyinka Ku Xidhnaanta Muraayada Muraayad?
RAAXAD: BADBAADADA DAMBIGA!
Difaaca Dabaysha Muraayadaha ayaa kaa caawin kara la dagaalanka daalka, dhabar xanuunka, iyo culeyska gacanta adoo ka qaadaya dabaysha wejigaaga iyo laabtaada. Hawo yar oo jirka ku riixeysa, waxay keeneysaa raacitaan raaxo iyo raaxo badan.
Qadkayaga gaarka ah ee muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa si gaar ah loogu talagalay oo loo farsameeyay si loo leexiyo dabeylaha qulqulaya oo looga fogaado adiga iyo rakaabkaaga. Qalalaase yar ayaa u dhigma raaxo badan iyo maylal badan.
Haddii aad qorsheyneyso wax ka badan dhowr saacadood oo keliya sadarka, muraayadda hore ayaa bixin doonta macaashka dhammaadka maalinta.
RAAXO: IILAALINTA Cimilada!
Ilaaliyaha Cimilada layaab malahan in muraayada hore oo leexisa qalalan, hawo kacsan ay sidoo kale leexin doonto hawo qoyan, qabow kacsan.
Roob ama iftiin, muraayad hore ayaa cimilada ka dhigaysa tixgelin labaad marka aad ku garaacayso wadada laba taayir. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay markaad 500 mayl - ama ka badan - ka soo jeedo guriga, oo aadan haysan waqti, lacag ama raaxaysi aad maalin roobaad ku qaadanaysid qol motel qalalan oo diirran.
Raaxo iyo raaxo marwalba wey soo hormaraan. Joogitaanka diiran iyo qallalan waxay dheereyneysaa waqtigaaga fuulitaanka waxayna kuu oggolaanaysaa inaad si ammaan ah u daboosho maylal badan.
AMMAANKA: BADBAADINTA DEBRIS!
Muraayadaha Muraayadaha ee loo yaqaan 'IBX' iyo carwooyinka waxaa loogu talagalay inay bixiyaan ka hortagga dabaysha iyo kordhinta raaxada raacitaanka, laakiin ma ahan difaac haddii ay dhacdo isku dhac gaari kale, xayawaan, ama shay kale.
Isla sidaas oo kale, waxay na siinaysaa farxad weyn markaan ka helno waraaqo ka imanaya wadayaasha cadeynaya xoogga muraayadaha indhaha ee saameynta ay ku leeyihiin shimbiraha, dubbayaasha feerka, iyo xitaa deerada!
Kuma talineyno inaad yeelato saaxiib adiga oo dubbaha ku garaacaya adoo fuushan si aad u caddeyso dhibic. Laakiin haddii wax aan saaxiibbo ahayn ay jidkaaga ku soo galaan oo aadan haysan muraayad xoog leh, runtii waxaad jeclaan lahayd inaad mid yeelato.
Alaabada Featured - Khariidadda bogga Rakibaadda Iskuulka Kawasaki, Vespa Gts 300 Gtv Rakaabka Shandadaha, Baaskiil Baaskiil Flat ah, Baaskiilka Gaaska Baaskiilka, Muraayada hore ee Honda Nmax, Vespa Gts Gtv 300 Boorsada Iskuulka,